China Fast payakabatanidzwa fekitari uye vagadziri | Donghuan
Kukurumidza kubatanidza izvo isu isu zvakanyanya zvataiburitsa zvakasiya masokisi, nzungu, uye zvisungo nezvimwe zvese zviyero zvinotsanangurwa zvinogadzirwa zvinoenderana nemufananidzo dhizaini. Kazhinji kutaura, zviyero zvese ndezvechokwadi, nekuti zvakakosha kuti uungane. Kune ese masoketi asati atumirwa isu tese tinoita 100% yemhepo kumanikidza kuyedzwa. Iyo yepamusoro inopisa inopisa kwakakurudzira uye nhema, isu zvakare tinotengesa kunze kweichi chigadzirwa.
1.Fast coupling yatainyanya kuburitsa yakasiya masokisi, nzungu, uye zvisungo nezvimwe zvese zviyero zvinotsanangurwa zvinogadzirwa zvinoenderana nedhirowa dhizaini. Kazhinji kutaura, zviyero zvese ndezvechokwadi, nekuti zvakakosha kuti uungane. Kune ese masoketi asati atumirwa isu tese tinoita 100% yemhepo kumanikidza kuyedzwa. Iyo yepamusoro inopisa inopisa kwakakurudzira uye nhema, isu zvakare tinotengesa kunze kweichi chigadzirwa.
2.Fast fittings inoshandiswa pakubatanidza simbi, PE uye dzimwe pombi.
3.Material: nyore kufurirwa simbi
4.Size Inowanikwa: 1/2 `` - 2 ''
5.Advantage: isu tine edu magadzirirwo mazwi, chero dambudziko pane iyo mold isu tinogona kuvandudza nekudzokorora. Semuenzaniso, dambudziko rezvigadzirwa vamwe vane maburi pamusoro, isu tinoita zvishoma paforoma kuve nechokwadi chekuti simbi yakanyungudika inogona kufamba mushe. vamwe pakukanda mwero wezvakagadzirwa zvigadzirwa wakaderera, saka takagadzirisa nzira yekukanda.
6.Surface: Hot Dip kwakakurudzira kana dema. Kupisa dip zinc zinc kupfeka: panodiwa dziviriro neinc yekunamatira, iyo zinc yekumhanyisa ichaiswa neanopisa dhiza maitiro uye achazadzisa zvinotevera zvinodiwa.
Pb <1.6 mune imwe nhambo 1.8
7.Maximum tembiricha yekushanda: 80 ° C
8.After-kutengesa sevhisi: Kana mutengi awana chinetso chigadzirwa, senge, kuvuza, kuputsa, hombe burr, mushure mekutarisa zvese isu tinogona kutumira imwecheteyo qty yemahara kumutengi.
Mitemo yekubhadhara: TT 30% kubhadharira zvigadzirwa usati waburitsa uye TT iyo bhezari mushure mekugamuchira kopi yeB / L, mutengo wese unoratidzwa muUSD;
9.Packing ruzivo: Yakarongedzwa mumakatoni ipapo pamapallets;
Zuva rekutumirwa: 60days mushure mekugamuchira 30% yekubhadharisa uye zvakare kusimbisa sampuli;
11.Kuwanda kushivirira: 15%.
Pashure: Steam Coupling
Zvadaro: Hose Mender
Stainless Simbi Minyatso, Air Hose payakabatanidzwa, Stainless Simbi Pipe Minyatso, Stainless Simbi Minyatso Uye Fittings, Mhepo Hose yekubatanidza Europen Rudzi, Kubatanidza Air Hose,